Sawirro : Qaabka ugu macaan marka Foorarka galmo lagu sameynaayo | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Sawirro : Qaabka ugu macaan marka Foorarka galmo lagu sameynaayo
Sawirro : Qaabka ugu macaan marka Foorarka galmo lagu sameynaayo
Bulsha:- Gaaloos ayaa kuu soo gudbineysa Sawirro kuu tilmaamaya sida saxda ah ee ugu macaan marka galmada la sameynayo gaar ahaan marka ay Islaanta foorarsato,taas oo la’isku raacay in ay ugu macaan tahay galmada ,waliba macaanka waxaa si wada jir ah u qeybsan doono labada dhinac.
Filim uu inoo soo diray mid kamid ah Tv-yada baahiya barasha arrimaha galmada ayaa qeexaya sida ugu wanaagsan ee loo sameeyo galmada ,casharkaas oo ay bixineysay haweeney madow ah oo ka soo jeeda dalka Kenya ,aadna ugu taqasustay arrmaha galmada.
Galmada ayaa ah mid macaan ,waxaana khubarada ay isku raaceen in galmada ay ugu macaan tahay marka la sameynaayo foorarka ,waliba marka ay foorarsato haweeneyda,taasoo macaan raaxo siisa Ninka xilligaas galmada la wadaagaya.
Sawirkan hoose waxaa uu tilmaamayaa in ay khalad tahay in haweeneyda ay u foorarsato qaabkan ,waxaana la sheegay hadii ay saan u foorarsato in laba arrimoodba ay dhacayaan ,tan koowaadna waxaa la sheegay in ay tahay mid halis ah caafimaadka Ninka iyo Naagtaba.
Tan labaadna waxaa la qeexaya in aysan jirin habayaraatee wax raaxo ah oo ay qaataan labadan qof ee galmada wadaagaya ,waxaana lagayaabaa in ay soo de dejiso in si dhaqsa ah lagu kala tago ,oo qofwalba oo fagaarteeyo ama cararo.